Voka-dratsin'ny valanaretina :: Namono olona efatra tao anatin’ ny 48 ora ny Covid-19 • AoRaha
Voka-dratsin’ny valanaretina Namono olona efatra tao anatin’ ny 48 ora ny Covid-19
Olona roa hatrany no matin’ny Covid-19 teto amintsika tao anatin’ny roa andro nisesy izao, araka ny tatitra ofisialy noentin’ny Profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Ivon-toeram-pibaikoana amin’ ny ady amin’ity valanaretina ity (CCO), omaly. Tafakatra roapolo ny isan’ny olona maty, nanomboka tamin’ny 19 marsa nisian’ny Covid-19 teto amintsika. Vao mainka mampanahy ny fidangan’ny isan’ireo marary mafy satria nitombo efatra amby roapolo ireo olona isehoana soritr’ aretina mahery ka lasa valo amby efapolo ny fitambaran’ izy ireo, omaly.
Isan’ny antony mahatonga ny fahafatesan’ireo olona voan’ny Covid-19 ny aretina mitaiza azy, toy ny diabeta sy ny aretin’ny tosi-dra ary ny fahasemporana. Manginy fotsiny ny hatsiaka sy ny goragora amin’ny fanarahan’ny olona ny fepetra ara-pahasalamana, tao anatin’ny andro maromaro izao.
Mamely eto Antananarivo
“Tsy holazainay intsony ny mombamomba an’ireo namoy ny ainy, manomboka izao, fa ny isany fotsiny”, hoy ny profesora tamin’ny antso an-tariby, afak’omaly.
Tsy mitsaha-mitombo ihany koa anefa ireo olona nifindran’ ny tsimok’aretin’ny Covid-19, ankehitriny. Omaly fotsiny no efa nahatratra enimpolo izy ireo ka avy eto Antananarivo ny sivy amby efapolo, raha avy any Moramanga kosa ny ambiny. Tafakatra valo amby telopolo amby zato sy roa arivo ireo olona voamarina fa mararin’ ny Covid-19, hatramin’ny nisian’izany voalohany teto Madagasikara. Roa amby dimampolo amby zato sy arivo ireo tsaboina any amin’ny hopitaly sy any an-tranony, amin’ izao fotoana izao.
Na eo aza ny fitomboan’ ny marary sy fisian’ireo namoy ny ainy, dia nahatratra roa amby roapolo ny olona nandresy ny valanaretina, omaly, ka nampiakatra ny tarehimarika ho enina amby enimpolo sy sivinjato.
Orinasa hamokatra fanafody :: Manomboka mitady mpiasa ny Pharmalagasy